Otú nyefee MP3 si iPod ka Computer
> Resource> iPod> otú nyefee MP3 si iPod ka Computer
Echekwara ọtụtụ songs koodu MP3 na gị iPod? Eleghi anya, ị chọrọ nyefee MP3 si iPod na kọmputa maka nzube nke ụtọ na kọmputa ma ọ bụ ịrụgharị iTunes listi ọkpụkpọ mgbe ihe na-eme. Otú ọ dị, na-ebufe MP3 faịlụ ka kọmputa bụ adịghị mfe ka ị idetuo na iPod. N'ihi ya, na-eme ka ya, ị mkpa ụfọdụ enyemaka. Wondershare TunesGo (Inyom Di Ha Nwụrụ) ma ọ bụ Wondershare TunesGo (Mac) na-akpan mere maka gị. Na nke a iPod na kọmputa transfer ngwá ọrụ, ị na-enwe ike nyefee niile ma ọ bụ họrọ faịlụ MP3 na kọmputa enweghị ihe ọ bụla hassle.
Download TunesGo nyefee MP3 si iPod ka PC.
Wụnye Windows ma ọ bụ Mac version na gị Windows kọmputa ma ọ bụ Mac. Na-esonụ akụkụ, na-ahapụ 'na-Windows version aha ya bụ Wondershare TunesGo dị ka ihe atụ.
Cheta na: ma nsụgharị na-arụ ọrụ nke ọma na iPod kpochapụwo, iPod ịkpọgharịa, iPod aka na iPod nano. Biko ego ihe ọmụma zuru ezu banyere akwado iPod ụdị na iOS. Ugbu a, Wondershare TunesGo (Mac) adịghị akwado ebufe MP3 si iPod aka 3 Mac.
Otú nyefee MP3 si iPod na kọmputa
Nke mbụ niile, na-agba ọsọ a iPod na kọmputa transfer ngwá ọrụ iji bugote window n'okpuru.
Cheta na: Iji jiri Wondershare TunesGo ọma, i kwesịrị ibudata ma wụnye iTunes na kọmputa.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ iPod na kọmputa site na eriri USB
Jiri eriri USB na-abịa na iPod ijikọ iPod na kọmputa. The ngwá ọrụ ga-amalite ịchọpụta iPod dị ka ogologo oge ọ na-ejikọrọ. Mgbe ahụ, iPod ga-egosi n'elu ke akpan window. Site na ịpị ọ bụla na akara ngosi site n'aka ekpe sidebar, ị nwere ike ihuchalu kwekọrọ ekwekọ faịlụ na nri.
Nzọụkwụ 2. Copy MP3 si iPod na kọmputa
Bịa ekpe sidebar na pịa "Media". Pịa "Music" na-music window. Lee, ndị niile music faịlụ na-egosipụta. Họrọ MP3 music faịlụ na ị na-aga nyefee. Pịa "Export ka". Na esiri-ala ndepụta, na-agagharị na kọmputa ruo mgbe ị na-ahụ a zọpụta ụzọ. Mgbe ahụ, ịzọpụta MP3 faịlụ ka ịzọpụta ụzọ.
Ị na-ahụ, na ihe dum nkuzi banyere otú idetuo MP3 si iPod na kọmputa. Ọ bụ incredibly mfe ime ya, ọ bụghị ya? E wezụga MP3 music faịlụ, ị nwekwara ike nyefee music encode site WAV, M4A, M4R, AIF na M4B si gị iPod na kọmputa dị ka mma.
Mmekọrịta Music si iPod ka iTunes
Olee otú Hichapụ Photos si iPod Mfe
Otú nyefee Videos si iPod aka ka Computer
Top iPod ka Computer Nyefee Free
Top 4 iPod Nyefee Ngwaọrụ
Olee otú Naghachi ehichapụ faịlụ site iPod aka 5/4
Ndenye Way naghachi Data tupu Unlock iPod aka 4
Olee otú Naghachi Data mgbe Ịtọgharị Your iPod aka